Chatbots -ku waxay muhiim u yihiin meheradaha si ay otomaatig ugu noqdaan isdhexgalka bulshada. Adeegga macmiilku waa hal aag oo sheekaduhu si aad ah waxtar ugu yeelan karaan, gaar ahaan maaddaama aysan jirin adeeg macmiil bani'aadam oo la heli karo. Taageerada badeecada iyo adeegyada is-adeegsiga ayaa ah meel kale oo wada-sheekaysiga si waxtar leh u imaan kara. Mid ka mid ah farsamooyinka muhiimka ah ee sii kordhaya adeegsiga ganacsiyada. Caawinta otomaatiga ah ee howlaha xafiiska iyo gaarsiinta taageerada macaamiisha iyada oo loo marayo jawaabaha otomaatiga ah ee weydiimaha macmiilka iyo codsiyada. Si aad si buuxda uga faa'iidaysato astaamahan chatbot -yada ganacsiyada waxay u baahan yihiin inay maal gashadaan sidii loo horumarin lahaa istaraatijiyadda chatbot -ka. Chatbots -ku waxay noqonayaan kuwo aad iyo aad muhiim u ah iyadoo ganacsiyadu ay raadinayaan inay si otomaatig ah u sameeyaan is -dhexgalka bulshada maadaama dad badan aysan si fudud ula falgalin bini -aadamka taleefanka. Chatbots -ku waxay u koraan si habboon iyadoo ganacsiyadu raadinayaan qaabab lagu yareeyo kharashaadka iyagoo si otomaatig ah u socodsiiya howlaha xafiiska si markaas loo sii daayo ilaha shaqaalaha. Chatbots -ku waxay hiigsanayaan inay gaarsiiyaan khibrad isticmaale oo loo habeeyay isticmaalaha ugu dambeeya iyadoon loo baahnayn isdhexgalka dadka ee tooska ah
Maxaa ku jira Chatbot?
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad fahanto waa maxay chatbot. Chatbots waa barnaamijyo kombiyuutar oo awood u leh inay ku jilaan oo ku dayaan wada hadalka aadanaha ee softiweerka. Kuwaas ayaa markaa loo adeegsan karaa in lagu shaqaysiiyo shaqooyin kala duwan. Chatbots -ku waxay dhegeysan karaan, fahmi karaan luqadda aadanaha, waxayna si la yaab leh waxtar ugu yeelan karaan ka jawaabidda su'aalaha iyo fulinta hawlo fudud. Waxay u egtahay macmiil riyo u ah adeeg bot nooc kasta huh? Si aad u fahanto sida shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda ay u isticmaaleen sheekaysiga sheekaysiga waxaa waxtar leh in si toos ah loogu boodo horumarinta chatbot. Sida laga yaabo inaad ogaato, wada sheekaysiga waxaa mar keliya si gaar ah u isticmaali jiray shirkado waawayn laakiin hadda waxay u gudbayaan warshado kala duwan sida tafaariiqda, daryeelka caafimaadka, suuqgeynta, eCommerce, xarumaha wicitaanka, iwm. sida adeegyada maaliyadeed, adeegyada SaaS, intarneedka, iyo in ka badan. Pat Flynn oo ka tirsan Nidaamyada Falcon wuxuu nagu wargelinayaa in chatbot -ka maanta loo tixgelin karo wakiil wada -hadal. Fikradiisa, si chatbot-ka loogu tixgeliyo wada sheekaysiga barnaamijyadu waa inay ahaadaan: In kastoo aad ka doodi karto haddii (iyo ilaa xad) shuruudahaas weli la buuxiyey (iyo sida shuruudahaas dib loogu fikirayo iyadoo ku xiran codsiga) Xaqiiqdu waxay tahay in wada -sheekaysiga si dhakhso ah u bislaaday. Horumarka Bot wuxuu si tartiib -tartiib ah ugu eg yahay farsamo ku wajahan fulinta ujeedo barnaamij adeeg gaar ah halkii uu ka ahaan lahaa wakiil si buuxda wax u weydiiya. Chatbot -ka ayaa si otomaatig ah loo adeegsan karaa iyada oo la adeegsanayo qoraalka AIML ama luqaddaada aad dooratay iyadoo la adeegsanayo barnaamij kasta oo fudud oo ka shaqaynaya qoraalka sida Gmail ama Google Docs. Ujeedadu waxay tahay in geeddi -socodka kor ku -duubidda qoraalka iyo ka -shaqaynta AIML uu yahay hab deg -deg ah oo fudud meel kasta oo aad ku horumariso bot -gaaga. Fikradda khaldan ee ugu badan ayaa ah in wada sheekaysiga loo dhisay kaliya ujeeddada ah in la shaqaaleysiiyo habka isdhexgalka bulshada ee la midka ah sida xarumaha wicitaanka dadka ama wakiilada adeegga macaamiisha. Sida Eric Foster ee Zapier uu noo sheegayo: “Horumarka chatbot -ku wuxuu ku saabsan yahay dhisidda nidaam la -qabsan karo, oo la fidi karo oo si dabacsan uga jawaabi kara si uu awood ugu yeesho ka shaqaynta is -dhexgalyada macaamiisha kala duwan.
Kac ee Chatbots
Calaamadaha ayaa diiradooda u weecinaya dhanka wada sheekaysiga maaddaama sheekaduhu awood u leeyihiin inay dakhli badan soo saaraan marka la barbardhigo isdhexgalka macaamiishooda (CSCI Actuarial 2020). barnaamijyada si otomaatig ah is -dhexgalka isticmaalaha. Chatbots -ku waa qaar ka mid ah qaababka ugu caansan ee sheekaysiga waxayna saamayn weyn ku yeesheen geedi socodka ganacsiga, gaar ahaan tafaariiqda, caymiska, bangiyada ganacsiga iyo warshadaha daryeelka caafimaadka.
Markay shaqaalaha bulshadu marka hore la hadlaan carruurta ay xannaaneeyaan, ma aysan haysan hab ay ku fahmaan ama ugu hadlaan luqadda ay ku baranayeen fasallada abaabulan. Jawiga looma dejin si loogu oggolaado inay si guul leh ugu dhex milmaan jawiga dugsiga. Maalin kasta carruurta waxaa la weydiiyaa inay ka jawaabaan is -dhexgalka arday kale iyagoo adeegsanaya magac gaar ah. Si kastaba ha ahaatee ma aysan ka caawin inay horumariyaan fahamka xaaladda shucuureed ee dadka kale ee iskuulka iyo naxariis la'aantu waxay ka mid ahayd arrimaha sida badan la soo xigtay ee la kulmay. Carruurtu way ku adkaatay inay gartaan dhaqanka iyo caadooyinka dugsiga ee geeddi -socodka kobcaya taasina waxay ku adkaysay inay dhistaan ​​dareen lahaansho. Barashada luuqad gaar ah waxay ahayd mid ka mid ah caqabadaha ugu cad -cad ee ay la kulmeen iyagoo ku hareereysan luuqad luqad kale ah, taas oo ay weheliso cabsi laga qabo inay ka maqnaadaan mowduuc waxay ku qasabtay inay bartaan tilmaamaha bulshada luqadda aysan ku baran geeddi -socodka waxbarashada (Semple, Moore & Green, 2012) Sannadaha soo socda, intii lagu jiray masiibada adduunka, isla tilmaamahaas bulsheed waxaa soo food saaray waalidiinta carruurta aan awoodin inay dhexgalaan habsocodka dugsiga. Waalidiintani waxay la kulmeen dhibaatooyin la hadalka carruurtooda waxayna inta badan isku arkeen inay si faahfaahsan u sharxaan waxay baranayaan mana awoodi doonaan inay keenaan macluumaad kale oo dibadda ah, haddii ay jiraan, marka ay la hadlayaan ayeeyada ay sii dhaleen. Barashada afka aan hooyo ahayn ayaa ahayd caqabad kale oo ay la kulmeen. Samaynta jawi sida goob guri oo daryeel -bixiyuhu kula hadlo ilmaha luuqadda uu daryeelaha baranayay ayaa ahayd caqabad kale oo luqaddan cusub soo bandhigtay, haddii ay awoodi kari waayeen inay degaankooda gurigooda kula degaan luqadda cusub.
Markii masiibada adduunka ay ku dhufatay, meherado badan ayaa waayey lammaanayaashoodii ganacsi, macaamiishii iyo kalsoonidii macaamiishooda ee waxay ku khasbanaadeen inay dib isu hindisaan. Caadooyinku waa farriimo maalinle ah oo aad hesho oo la xiriira yool gaar ah. Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo ku aaddan dhaqangelinta caadooyinka, oo ay ku jiraan otomaatiga aan kor ku soo sheegnay ee shaqooyinka, badbaadinta kharashyada, iyo hubinta isku xirnaanta dadka kale.